Mogadishu Journal » 2018 » September » 11
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Marka ee xarunta gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in caawa ay weerar kedis ah ku soo qaadeen dagaalyahano ka tirsan ururka Alshabaab iyagoo gudaha u galay xaafado ka mid ah magaalada Marka. Dadka ku sugan magaalada Marka ayaa waxa ay...
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug oo mooshin laga gudbiyay
Mjournal :-Guddoomiye kuxigeenka Koowaad ee baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta aqbalay mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo ay keeneen xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi. Mudanayaasha oo mooshinkooda u gudbiyey guddoomiye Xareed...
Odayaal u afduubnaa Al-shabaab oo soo baxsaday
Mjournal :-Todobo ka mid ah 61 qof oo ka mid ahaa dadkii degaanka Gal Qoryaale ee gobolka Galgaduud oo dhawaan ay afduubteen Al Shabaab ayaa ka soo baxsaday gacanta kooxihii afduubka u heystay. Qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday gacanta Al Shabaab oo xiriiro kala duwan aan la...
AKHRISO: Maxaa kasoo baxay shirkii deg dega ee Wasiiradda Puntland
Mjournal: -Kulan ay maanta ku yeesheen Magaalada Garowe ee Caasimadda Golaha Wasiiradda Puntland ayaa lagu taageeray go’aankii Golaha Iskaashiga maamul goboleedyadda ee ahaa in la hakiyay Xiriirkii kala dhaxeeyay dowladda Soomaaliya. Dhinaca Kale Golaha Wasiirada Puntland ayaa ka...
WASHINGTON – As the African Union Mission in Somalia (AMISOM) prepares to implement the planned phased withdrawal of more than 21,000 troops fighting militant groups, including al-Shabab and the Islamic State in Somalia, some experts are concerned that the country may not...
Washington will sanction and prosecute ICC judges who open an investigation into US war crimes in Afghanistan, said a top official. In November, the ICC chief prosecutor requested a probe into criminal action by the US US National Security Adviser John Bolton on Monday threatened...
Daafac uu jecelyahay Mourinho oo diiday Man Utd
Toby Alderweireld ayaa u sheegay taageerayaasha Tottenham inuu marnaba ka tagi dooonin kooxdiisa xagaaga. Iyadoo qandaraaska uu kula jiro Spurs uu dhawyahay, daafacaan lala xiriirinayay kooxda Manchester United intii uu furnaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa meesha ka saaray...
Hoggaamiyeyaasha Itoobiya iyo Eritrea oo dib u furaya xadkii dhulka la isaga tallaabayay labada dal
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa booqanaya aagga Bure oo ka mid ahaa deegaan horay labada dal ugu muransanaayeen, kana mid ahaa goobihii dagaalada ba’an ka dhaceen 20-sano ka hor. Deegaanka Bure ayaa 80KM u jira...
Muhaajiriin ku dhintay xeebaha Liibiya
Mjournal :-Hay’adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in muhaaajiriin ka badan 100 qof ay toddobaadkan dhinteen. Muhaajiriintani ayaa sida ay hay’adda sheegtay ku dhintay xeebaha dalka Liibiya, dadkani muhaajiriinta ah oo intooda badan ka soo jeeda Afrika ayaa...
Difaac ka tirsan Chelsea oo qaba in hal ciyaaryahan oo keliya uu ka wanaagsan yahay Hazard
Eden Hazard waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xiddigaha ugu halista badan ee kubadda la duulaan gala. Waxaana Chelsea laacibkeeda sida caadiga ah lagu tiriyaa xiddigaha beddeli kara Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo marka ay faarujiyeen masraxa kubadda cagta oo ay awood sare...
Ciidamada Booliska oo Muqdisho ku dilay Horjooge ka tirsan Al-Shabaab oo muddo la baadigoobayay
Mjournal :-Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada Huriwaa ee Gobolka Banaadir ayaa waxay ku dileen sarkaal ka tirsan Al-Shabaab. Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabayay Abuukar Xasan Cadde oo loo yaqaanay Sayid Abuukar ayaa ka...
Mareykanka oo kordhinaya dagaaalka Drones-ka Soomaaliya
Mjournal :-C.I.A-da Mareykanka ayaa wuxuu sheegay inuu kordhinayo weerarada cirka ah ee ka dhanka ah kooxaha ka dagaalama Afrika, bacdamaa uu dhimayo ciidanka dhulka ka hawlgala. Warbixin uu soo saaray C.I.A-da ayaa waxaa lagu sheegay 800 askari oo Mareykanka ka jooga dalka Niger...